Working together against racist policies - Amjambo Africa
Working together against racist policies
“Ibuye ribonetse ntiryica isuka.”
Hadalkani waa mid caan ka ah Kinyamulenge, oo micnaheedu yahay,
“Dhagax la aqoonsaday mar dambe ma dhaawici doono hoe.”
12-kii Maarso waxay ahayd maalintii faafitaanka COVID-19 uu si rasmi ah ugu dhacay xaaladdeena wanaagsan ee Maine kiiskeedii ugu horreeyay. Markiiba ka dib, rajada laga qabo in qof walba laga helo caafimaad iyo amaan, Gov. Janet Mills waxay ku dhawaaqday xaalad iyo xaalado degdeg ah. Toddobaadyadii ugu horreeyay, cabsida aan la garanayn waxay ka muuqatay wajiyada dadka. Mana jiro qof ogaa sida fayrasku usameenayo, dhamaanteen waxaan rabnay inaan baranno sida aan nafteenna iyo kuwa aan jecel nahay uga ilaalino qatarta. Xarunta Maine ee Xakameynta Cudurku waxay ku talisay kahortagga iyo tillaabooyin aan horay noogu baranay – mashquulinta bulshada, dhaqida gacmaha oo isdabajoog ah, daboolida qufaca iyo hindhisada, iyo nadiifinta meelaha la taabto. Iskusoo wada duuboo, joogitaanka guriga ayaa si aad ah loogu taliyay sida ugu waxtarka badan ee looga badbaado fayraska.
Nasiib darrose, joogitaanka gurigu aad bay ugu adkaatay dadka midabka badan leh inay sameeyaan. In kasta oo hay’ado iyo hay’ado badan, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladubaba ay qaateen talaabada xad dhaafka ah ee ay albaabada u xidheen oo ay ka codsanayaan shaqaalahooda inay ka shaqeeyaan guriga, ganacsiyada safka hore ee muhiimka ah – daryeelka caafimaadka, dukaamada raashinka, guryaha kooxaha, warshadeynta cuntada – ayaa wali furan. Iyo gudaha Maine, ganacsiyadaas lama huraanka ah waxaa si aad ah ugu shaqeeya dadka madow.
Farqiga u dhexeeya sida dadka cadaanka ah iyo dadka midabka leh uu virus ugu haleelay Maine, dadka midabka leh waxay ka kooban yihiin 7% kaliya dadweynaha, laakiin hadda waxay tiriyaan in kabadan 32% gobolka. tirada guud ee COVID-19 kiis. Sababaha saameyntan aan loo kala saarin ayaa waxaa ka mid ah xaaladaha dadku ku badan yahay ee ay dad badan oo midab leh ay ku noolaan karaan sababtoo ah duruufo dhaqaale oo adag, iyagoo ka dhigaya go’doomin iyo gooni u goosad adag; helitaan ku filan oo daryeel caafimaad ah, taasoo dhalisay sababaha xaaladaha caafimaad ee hoosta ku jira; iyo daruuriga ah in la sii wado ka shaqeynta shaqooyinka safka hore inkasta oo ay jiraan qatarta jirta awgeed. Si kale haddii loo dhigo, natiijooyinka waxay la xiriiraan siyaasadaha cunsuriyadda.
Hoggaamiyeyaasha soogalootiga, hoggaamiyeyaasha Latinx, hoggaamiyeyaasha qabaa’ilka, iyo hoggaamiyeyaasha ka soo jeeda Mareykanka ee u dhashay Mareykanka Mareykanka ayaa dhammaantood si weyn uga walaacsan caafimaadka iyo amniga dadkooda. Dhawaan hoggaamiyeyaashani waxay marti-geliyeen shir-saxaafadeed, halkaas oo ay ku muujiyeen dareenkooda ugu weyn, oo ay ka mid yihiin meelaha muhiimka ah ee bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan saameyn ku leh beelahooda oo ay tahay in la beddelo, waxayna ka codsadeen Gov. Mills inay kala shaqeeyaan iyaga ka hortagga musiibo kale. Dhawaan, wareysigii ugu horreeyay ee fiidiyoow ee Amjambo Afrika, waxaan kaga wada hadlay cunsuriyadda iyo sida loo beddelo nidaamka, Rev. Kenneth I. Lewis Jr., wadaadka sare ee kaniisada Green Memorial African Methodist Episcopal Zion Church ee Portland. Bishii Juun 30, waxaa magacaabey Gov. Mills to Guddiyada Joogtada ah ee Xaaladda Cunsuriyad, Asal ahaan, iyo Dadweynaha Maine, oo diiradda saaraya wax ka qabashada sinnaan la’aanta Maine. Rev. Lewis wuxuu ka hadlay baahida loo qabo hogaamiyaasha madoow ee ka soo kala jeeda bulshooyinka kala duwan ee Maine – soogalootiga iyo dhalashada Mareykanka ee u dhashay Mareykanka Mareykanka – si loo mideeyo, isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo bulshada oo dhan inay runta ka hadlaan awoodda ku saabsan cunsuriyadda Maine. Waxaan ku soo biirayaa Rev. Lewis anigoo ku boorinaya dhamaan dadka midabeysan inay meel iskugu yimaadaan iyo inaga xoogga codkeena wadajirka ah si sare loogu doodo isbedelka aan u baahanahay inaan ku aragno bulshadayada Maine.
PreviousKiisaska COVID-19 ayaa si tartiib ah kor ugu sii kacaya qaarada Afrika- sidee ayuu kudhacay waa maxay Sababtu?
NextAfrika iyo COVID-19 dagalki lagula jiray. Cusbooneysiinta qaar ka mid ah qaaradda.
Xusuusnow is daryeelid adiga oo caawinaya kuwa kale
Amaan noqo markaad lacag u dirayso